Xiaomi Mi 9 24 carat yegolide: uyilo, ixabiso kunye neempawu | I-Androidsis
Zonke Usapho lweXiaomi Mi 9 ibe yimpumelelo enkulu kwindawo yentengiso. Sithetha ngoluhlu lweetheminali ezibalaseleyo zokubonelela ngexabiso elingenakubethwa yimali, kunye noyilo olunomtsalane ngokwenene. Nangona kubonakala ngathi inkampani ifuna ukunika i-twist entsha ye-screw.
Njani? Ukuqalisa umgca okhethekileyo we-flagship yayo enkulu kunye nenqaku elithile: iya kuba yi-Xiaomi Mi 9 eyenziwe nge-karat zegolide ezingama-24, ke esi sisixhobo seprimiyamu kwaye sinokufikelela kubasebenzisi abambalwa kakhulu. Ungayichazanga eyokuba iya kuba lushicilelo olunomda.
Iinkcukacha ezithe kratya zeXiaomi Mi 9 ezenziwe nge-carat ezingama-24
Njengoko ubona kumfanekiso ophethe le migca, kuya kubakho iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo kunye neserigraphy yenamba, ingonyama nenyoka. Sithetha ngesixhobo esiza kwenziwa liqela le-Concept yeGolide, iqumrhu elikhethekileyo kolu hlobo lweemveliso zepremiyamu kwaye, ngelo xesha, lasungula ityala kwi-iPhone XS enoyilo olufanayo kunye nokugqitywa kwegolide efanayo.
IXiaomi Mi 9 ifumana uhlobo lwamva lwe-beta 10.9.4.17 ye-MIUI ekhusela kubagculeli
Ewe kunjalo, kufanele ukuba icace gca ukuba le nguqulo yeXiaomi Mi 9 iya kuba ngumzimba wayo wokwenyani oza kwenziwa ngegolide engama-24 yegolide, asithethi ngenkqubo elula. Umbuzo omkhulu osihlaselayo ngowokuba, ingaba ukuzibophelela kwezi zinto zokwenza umzimba weflegi yosapho lweMi 9 kuya kuphazamisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye ne-NFC yesiphelo.
Okokugqibela, malunga nexabiso eliya kuba nalo I-Xiaomi Mi 9 yenziwe nge-carat engama-24, Okwangoku asinalo ulwazi ngayo, kodwa sinokucinga ukuba indleko zayo ziya kuba phezulu kakhulu. Okungakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba sijamelene neeyunithi ezinomda. Kwaye izixhobo zakho? Iya kufana ncam nenguqulelo yesiqhelo, kuphela kugqityiwe okusetyenziselwa ukumilisela umzimba weprimiyamu oya kutshintsha. Ucinga ntoni ngale Mi 9 igolide?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi ulungiselela inguqulelo yeprimiyamu yeXiaomi Mi 9: enomzimba owenziwe ngegolide engama-24 yegolide!
IKhalenda kaGoogle ingena kwiqela elikhethiweyo kwezona zicelo zikhutshelweyo